Ukondla Izimbuzi Emadlelweni
Amadlelo (umhlaba ombozwe ngotshani) uvame ukuphakama kwamandla kanye namaprotheni uma kusesimweni sokukhula (vegetation). Kodwa-ke, ngenkathi ikhula inokuqukethwe komswakama ophezulu futhi kunzima ukuba u-doe okhiqizayo ophezulu noma inyane elikhulayo ukuze udle utshani obwanele ukuze uhlangabezane nezidingo zalo zomsoco. Ngaphezu kwalokho, njengoba izitshalo zivuthiwe, ukunambitheka kwawo nokugaya kwehle kakhulu, ngakho-ke kubalulekile ukuguqula amadlelo ukuze ugcine izitshalo endaweni yemifino.
Ngaphandle kwenkathi ekhulayo, i-hay izoba yisithako esiyinhloko sokudla kwezimbuzi zakho.
I-Ryegrass iyakuthanda kahle phakathi nenkathi yokudla kuze kukhule ngo-September kuya ku-Okthoba. I-Kikuyu isheshe ibe yindlala futhi ingenakulinganiswa, ikakhulukazi kamuva ehlobo. Qaphela ukuthi ungadli ukondla kakhulu okuphakelayo (amandla aphezulu noma ukuphakama okuphezulu kwamaphrotheni njengokolweni noma ukondla i-soya) - ngoba bavame ukubiza. Kodwa futhi ungalindeli okuningi emadlelweni bese udla ukudla okuncane kakhulu kokudla, futhi ngaleyo ndlela kunciphise ukukhiqizwa kwembuzi.
Izinkathi zokugaya kufanele zihlanganiswe ukuze zivumelane nezikhathi zokufaka umanyolo nokunisela kwamadlelo. Shiya isikhathi esanele emva kokukhulelwa (ngaphambi kokudla) ukunciphisa ubungozi bokushisa umuthi kusuka kumanyolo. Kungadingeka ukuhlwanyela ukukhula ngokweqile utshani obuningi ngesikhathi sezinsuku eziphakeme zonyaka.
Isingezelo Sezimbuzi Ezidla Emadlelweni
Lapho kudliwa khona isisekelo se-roughage supply, inkinga enkulu kuyoba ukunquma ukuthi yikuphi ukudla okomile (DM) okuzovela emadlelweni. Uma kunikezwa ukugxila okungaphezulu, izimbuzi zingashintsha ukudla kwazo bese zidla amadlelo amancane. Uma kuphela amadlelo omgangatho ompofu atholakalayo, ukudla kungase kuhlanganiswe nge-200 - 350 gm yokugxila kwisilwane ngasinye / ngosuku ngokuya ngeminyaka yabo. "Iso lomuntu oyisitokisi" kubaluleke kakhulu njengoba umlimi kufanele ahlole ukuphendula kwezimbuzi ukuze kuguqulwe ukutholakala nokutholakala kokudla.
Umlimi kumele alinganise ukudla kwe-DM okulindelekile kusuka emadlelweni futhi anikeze ukwesekwa kokugxila ngokufanele. Uma umlimi esho ukuthi ukudla kwe-DM kufanele kube ngaphezu kwalawo okulinganiselwe, kunganciphisa ukulinganisa okugxilwe kuyo. Uma ukukhiqizwa ubisi kwehla ngenxa yokushintsha kokudla, ukudla okugxile ekudleni kufanele kulungiswe ukuze kuqinisekiswe ukwehla kokukhiqiza ubisi akusiyo unomphela. Izimbuzi zobisi zidinga okusanhlamvu ekudleni kwazo ukuze zisekele uketshezi.
Izimbuzi ezikhulelwe (izinyanga ezine zokuqala zokukhulelwa) kufanele zifinyelele emadlelweni amahle amahora angaba ngu-5 / ngosuku futhi zingafakwa nge-5 kg ​​wefolda eluhlaza ngosuku. Ngenyanga yokugcina yokukhulelwa, lokhu kungenziwa ukwandisa kube ngu-7 kg ngosuku ngaphezu kokunikeza ukondla kokudla okungu-250 - 400 gm / usuku / isilwane.
Amadlelo amahle kufanele ahlinzekele zonke izakhi ezidingekayo, kodwa zingadinga ukondla kokudla kuka 150 - 200 gm / ngosuku emadlelweni ampofu.
Izimbuzi kufanele zihlale zifinyelela mahhala kumaminerali aphezulu aphezulu ahlelwe ngqo ezimbuzi. Lokhu kufanele kube nokuthutha okwanele futhi kube lula futhi akusilo i-block mineral block.
Ukondla Amazinyane Emadlelweni
Kuze kube izinyanga ezintathu ubudala, imbuzi yezinyane izothola ingxube yobisi (ubisi lwezimbuzi noma inkomo), ukutshala okuhlaza okuhlaza kanye nokudla okunyukayo - ukudla okunomsoco okunezakhi ezibekwe endaweni ekhethekile lapho izimpongo ezikhulile zingakwazi ukufinyelela khona. Kusukela ezinsukwini ezingu-90 izingane zingasetshenziswa ukuze zidle emadlelweni amahora angaba ngu-8 / ngosuku. Ukudla okungeziwe ngokuqukethwe kwamaprotheni okuyi-15 - 18% kungadliwa nsuku zonke; cishe 125 - 200 gm / isilwane / usuku.
Nikeza ifolishi eyomile ngesikhathi sokulala noma ngesikhathi semvula.